Heung-min Son Childhood Story
Home TAFIKA ASIA FOOTBALL Son Heung-min Zaza Ankizy Miampy Filazana Untold Biography Facts
Son Heung-min Zaza Ankizy Miampy Filazana Untold Biography Facts
Ity bio ity dia manome fitantarana feno momba ny fiainam-pianakaviana Son Heung-min, ny fahazazan'ny zaza, ny fiainana voalohany, ny zava-misy momba ny tantaram-piainana, ny fitantaran'ny tovovavy, ny fomba fiaina, ny fiainana manokana ary ny zava-dehibe lehibe hatramin'ny fahazazany ka hatramin'izy nalaza.
Ny fiainana sy ny fiakaran'ny Son Heung-min. 📷: Instagram.
Eny, fantatry ny mpankafy ny fahaizan'ny winger sy ny fahaizana mampiasa tsara ny tongotra roa. Na izany aza, vitsy ny olona mamaky ny tantaram-piainan'i Son Heung-min, izay manome sary feno momba azy. Raha tsy misy ado fanampiny, andao hanomboka.
Tantara momba ny fahazazan-jaza Son Heung-min:
Manomboka, Son Heung-min dia teraka tamin'ny andro faha-8 Jolay 1992 tao Chuncheon, renivohitr'i Gangwon any Korea Atsimo. Izy no faharoa amin'ny zanaka roa naterak'i Eun Ja Kil sy ny rainy, Son Woong-Jung.
Iray amin'ireo sary malaza indrindra tamin'ny Son Heung-min. 📷: LB.
Nihalehibe tao amin'ny toerana nahaterahany tao Chuncheon i Son Young. Tao an-tanàna dia nanana fahazazany fanatanjahantena izy ary tanora nahavokatra niaraka tamin'ny zandriny lahy iray sy ny zokiny - Heung-Yun Son.
Nihalehibe tao Chuncheon, ny zazalahy kely dia nanomboka nilalao baolina kitra raha vao nahalala ny nandeha tongotra. Noho ny fanatanjahantena dia tsy nahaliana ny filalaovana lalao amin'ny solosaina na lalao ny manodidina azy i Son.
Tamin'ny fotoana fahatanoran'ny prodigy baolina kitra, ny dadany - Son Woong-Jung dia nanontany raha tena manana ny sombiny amin'ny fahitana ny baolina kitra izy. Ny valin-tenin'i Son dia hoe "eny" ary faly ny dadany nanofana azy. Ny fanofanana ilay tanora dia tsy sarotra ho an'i Son Woong-Jung. Izany dia lehibe indrindra noho ny naha mpilalao baolina matihanina efa nanam-potoana izy. Raha izany no izy dia nanintona ny zavatra niainany taloha izy amin'ny fampiofanana Zanaka niaraka tamin'ny anadahiny. Ny renin'i Son dia faly nijery sy nikarakara ireo zanany lahy isaky ny fotoam-piofanana.
Ahoana ny fanombohan'ny baolina kitra ho an'ny Son Heung-min:
Miresaka momba ny fotoam-piofanana mandreraka, fantatrao ve fa i Son sy ny zokiny dia natao tamim-pahazotoana mba hampihatra ny fototry ny baolina kitra tsy latsaky ny 6 ora amin'ny andro isan'andro amin'ny herinandro? Ankoatr'izay, ireo tanora dia nomena mandritra ny 4 ora tsy nijanona Keepy Uppies (antsoina koa hoe Juggling). Raha ny tena izy dia matetika nahita bala telo tamin'ny maso mena rovitra mandriaka rehefa avy adiny telo teo ho eo.
Son Heung-min sy ny zokiny dia nanao fitondrana hentitra nandritra ny 4 ora hoe 'Fiambenana' amin'ny fitaizana zaza. 📷: BBC.
Tany am-boalohany Son Heung-min tamin'ny Football Competitive:
Tamin'ny fotoana nanombohan'i Son 14 taona dia nomen'ny dadany malalaka ny hilalao lalao. Amin'ny teny hafa, i Son dia tsy afaka hilalao kilalao mandrapaha-14 taona satria ny dadany dia nino fa ny hetsika dia manimba ny tanjaky ny atleta tanora amin'ny asany be loatra.
Ny prodigy baolina kitra dia 14 taona monja raha nanomboka nanao lalao nifaninana izy. 📷: Instagram.
Noho ny maha-mpianatra haingana dia haingana - ankoatry ny fananana fototra tsara amin'ny taranja baolina kitra dia tsy nisy olana nampidirina tao amin'ny rafitry ny tanora tanora ao amin'ny Oniversite tanora Hamburger SV taorian'ny nidirany tamin'ny ilany Alemana tamin'ny Novambra 2009
Biography nataon'i Son Heung-min - Tantaran'ny Làlana ho Fame:
Taorian'izay dia nanomboka nandrakitra ny fandrosoana ny faran'ny asa nataon'i Son, taorian'ny nanomezan'i Hamburger SV azy ny fifanarahana matihanina voalohany tamin'ny andro nahaterahany tamin'ny volana Jolay 2010. Nandeha nandany roa taona niaraka tamin'i Hamburger ilay zazalahy feno fiantrana talohan'ny nandraisany firaketana an-tsoratra tany Bayer. Leverkusen tamin'ny 2013. Tao amin'ny klioba no navelan'ny Zanaka marika mahavoa maso tao anatin'ny roa taona. Ity dia nahaliana ny klioba marobe ao anatin'izany i Tottenham Hotspur izay nomen'ny Zanany sonia azy.
Izy dia 'Son-sational' tao Bayer Leverkusen. 📷: giveMeSports.
Biography nataon'i Son Heung-min - Mitsangàna tantara malaza:
Rehefa nametraka tamin'ny fomba ofisialy ny White Hart Lane taloha tsara tarehy tamin'ny volana septambra 2015 i Son dia manana hirika fanta-daza iray fotsiny izy. Tsy afa-tsy tamin'ny naha mpilalao azy lafo vidy indrindra tamin'ny tantaran'ny baolina kitra tamin'izany fotoana izany.
Mandeha amin'ny onjam-panantenan'ny mpankafy sy faniriana manokana, ny hazakazaka dia nanao hazakazaka tena tsara izay nanampy azy hanana fijery tsara amin'ny vanim-potoana roa voalohany ho an'ny English Side. Ny Son dia lasa mpisava lalana ambony indrindra any Azia tamin'ny taonjato fahatelo. Tsy ela taorian'izay, dia lasa mpilalao baolina kitra faran'izay ambony indrindra teo amin'ny tantaran'ny Champions League izy tamin'ny vanim-potoana fahefatra.
Manaraka haingana ny fotoana hanoratana ity Biography Sonny ity, izy dia hita ho iray amin'ireo fananana sarobidin'i Tottenham ary koa ny Korea Koreana lehibe indrindra nilalao ny lalao tany Eropa. Na inona na inona fomba hahazoana tombom-barotra ho azy, ny ambiny, araka ny nambarany, dia ny tantara foana.
Mitana ny laharana manaraka ny mpilalao Azia tsara indrindra izay nilalao ny lalao any Eropa. 📷: Tanjona.
Momba ny sakaizan'ny Son Heung-min:
Ireo firaketana an-tsoratra natao tamin'ny LB hatramin'ny Mey 2020 dia mampiseho fa irery ny Zanaka tamin'ny fotoana nanoratana saingy nanana vehivavy roa tamin'ny tantarany mampiaraka. Anisan'izy ireo ny kintana pop koreanina Bang Min-ah sy Yoo So-tanora. Na dia azo antoka aza fa tantara ny mpamosavy sy Bang Min-ah dia tsy azo lazaina ho toy izany ihany koa ny fifandraisany amin'i Yoo So-tanora satria ny duo no tompon'ny zava-kanto hitandroana azy ireo manokana.
Ireo vehivavy nanao azy ho amin'ny fiainana feno fitiavana Son Heung-min. Bang Min-ah (ankavia ankavia) sy Yoo So-tanora (ambany havanana). 📷: WTFoot.
Ambonin'ny zava-drehetra, vetivety dia alohan'ny hanaovan'ny Zanaka vady ny iray amin'ireo zavatra tiana fantatra na tsy fantatra. Nasehon'i Son indray mandeha fa manaraka ny torohevitry ny dadany izy hanatanteraka ny nofinofiny amin'ny baolina kitra. Araka ny voalazan'i Son, dia nanoro hevitra azy ny dadany mba hifantoka tanteraka amin'ny asany ary tsy mahazo vady na zanaka satria tsy ho tombontsoany tsara izy raha tsy efa misotro ronono.
Fiainam-pianakaviana Son Heung-min:
Ny tantaran'ny Son Heung-min dia mbola aingam-panahy tokoa ho an'ny mpilalao baolina kitra maniry fisaorana, noho ny fianakaviany izay nahavita izany. Izahay dia milaza aminao momba ny fianakavian'i Son Heung-min manomboka amin'ny ray aman-dreniny.
Misimisy kokoa momba ny rain'i Son Heung-min:
Zan Woong-Jung dia raiko, namana namana mpanazatra amin'ny taranja baolina kitra. Teraka tamin'ny 10 jona 1962. Ny raim-pianakaviana roa dia nanana asa manan-danja nilalao baolina kitra matihanina tany Korea Atsimo talohan'ny nahavoa azy noho ny ratra tamin'ny faha-28 taonany. Faritany ary manana izay ilaina amin'ny fanatevenana ireo mpanazatra mpanazatra amin'ny klioba football ao Tottenham.
Son Heung Min miaraka amin'ny rainy. 📷: Instagram.
Mikasika ny renin'i Son Heung-min:
Eun Ja Kil no ray aman-dreny izay nahazoan'i Son ny 75% ny paoziny mahafatifaty. Toa an'i Neny Ja Kil dia nanohana ny zanany foana i Eun Ja Kil. Nirehareha izy hoe hatraiza ny nahatongavan'ny Zanaka tamin'ny baolina kitra matihanina ary maniry azy mafy indrindra amin'ny ezaka ataony.
Son Heung-min miaraka amin'ny reniny. 📷: Instagram.
Momba ny rahalahin'i Son Heung-min:
Ny zananilahy dia tsy manana anabavy afa-tsy ny zokiny izay mitondra ny anarana hoe Heung-Yun Son. Toa an'i Son, i Heung-Yun dia nanana asa be dia be nanangana ny fototry ny baolina kitra teo ambany fitarihan'ny dadany talohan'ny nanombohany fampisehoana amin'ny lalao fifaninanana. Fantatra fa teo amin'ny ilan'ny Alemanina izy - SV Halstenbek tamin'ny 2013. Nanomboka teo, tsy dia fantatra firy momba ny asany tsy dia mahay loatra amin'ny baolina kitra.
Son Heung-min miaraka amin'ny zokiny. 📷: Instagram.
Momba ny havan'ny Son Heung-min:
Mifindra mankany amin'ny razamben'i Son Heung-min sy ny ankohonany, tsy misy firaketana ny raibeny. Mitovitovy ihany koa ny antsipirihany momba ny foko misy azy. Ankoatr'izay, ny tsy zanak'olo-mpiray tam-po aminy, nenitoana ary zanak'olo-mpiray tam-po aminy dia tsy fantatra raha mbola eo am-piainany ny zanak'anabaviny sy ny zanak'anabaviny.
Fiainan'ny tena an'ny Son Heung-min:
Lavitry ny fianakavian'i Son Heung-min sy ny endriny an-tery noho ny fanenjehana, ny fiheverana sy ny zava-misy momba ny fanoherana ny fanoherana, ny fanehoana azy, ny olona iray izay miahy, mahatoky, feno finiavana, manam-pahaizana ary manana ambiny. Ilay filoham-bazaha miloko izay misy ny Zodiac Sign dia kankana dia manao hetsika maro isan-karazany izay noheverin'ny maro ho tiany sy fialamboliny. Anisan'izy ireo ny dia mandeha, miasa, milalao lalao video, mijery filma ary mandany fotoana tsara miaraka amin'ny fianakaviany sy ny namany.
Ny filalaovana lalao video dia iray amin'ireo fialamboliny. 📷: Instagram.
Fiainana Son Heung-min:
Mikasika ny fomba nandraisan'i Son Heung-min sy nandaniany ny volany, fantatrao ve fa manana tombony 20 tapitrisa dolara 2020 dolara izy raha XNUMX? Fantatra amin'ny ankapobeny fa ny ankamaroan'ny harenan'ny Zanaka dia avy amin'ny karama sy karama ary bonus azony alaina amin'ny lalao baolina kitra voalohany. Na izany aza, tsy maro no mahalala fa nahazo zana-bola be i Son tamin'ny fifanekena. Noho izany dia manana vola be izy izay azony atao handany ny fananana toy ny fiara sy trano. Na dia nisafidy ny hiara-mipetraka amin'ny ray aman-dreniny ao amin'ny efitrano fandriana telo tao Hampstead aza i Son, dia tsy miraharaha ny fisian'ny garazy an-trano izay manao dia lavitra be izay ampiasainy hivezivezy amin'ny arabe any London.
Ny mpanao hatsikana baolina kitra dia misy fitambaran-tsambo mandeha amin'ny haingo. Youtube: Youtube.
Zava-misy ao amin'ny Son Heung-min:
Ny hamonosana ny tantaram-piainan'ny Zanantsika Heung-min amin'ny fahazazana sy ny tantaram-piainanay eto dia tsy fantatra na tsy fantatra loatra momba azy.
Zava-misy # 1- Famotsiam-bola:
Ny fifanarahana nataon'i Sonny miaraka amin'ny Spurs dia mahita azy mahazo karama £ 140,000 isan-kerinandro. Isika ho lasa isa kely kokoa dia manana izao manaraka izao.
Nandresy (KRW) ny valiny any Korea Atsimo
Per Year £ 7,291,200 $8,825,049 € 8,155,032 KRW 10,882,952,647
isam-bolana £ 607,600 $735,421 € 679,586 KRW 906,912,720
Isan-kerinandro £ 140,000 $169,452 € 156,587 KRW 206,966,065
Isan'andro £ 20,000 $24,207 € 22,370 KRW 29,852,294
Isaky ny ora £ 833 $1,009 € 932 KRW 1,243,845
Isaky ny Minut £ 13.8 $16.81 € 15.53 KRW 20,731
Isaky ny segondra £ 0.23 $0.28 € 0.25 KRW 346
Izany no Son Heung-min nahazo tombony hatramin'ny nanombohanao ity pejy ity.
Fantatrao ve? ... Ny olom-pirenena teratany Koreana Tatsimo izay mahazo KRW miisa 9,800,000 XNUMX XNUMX dia mila miasa fito taona ary valo volana mba hanao izay azon'ny Son Heung-min ao anatin'ny iray volana.
Zava-misy # 2 - Fandroahana ny miaramila:
Nahita fahazoan-dàlana i Son raha nandray anjara tamin'ny fanompoana miaramila miaramila Korea Atsimo 21 volana tamin'ny alàlan'ny fitarihana an'i Korea Atsimo handresy volamena tamin'ny Lalao Aziatika tamin'ny 2018. Na izany aza, nahavita fiofanana miaramila miaramila 4 herinandro mahery tamin'ny Mey 2020. Ny serivisy fototra fohy dia natao ho an'ireo tanora Koreana izay afaka nahazo fanavotana tamin'ny fanompoana roa taona akaiky.
Sarin'ny Son Heung Min taorian'ny nahavitan'ny fiofanana tao amin'ny tafika. Niresaka ve isika fa mpiofana manana loka? eny izy. 📷: TheSun.
Zava-misy # 3 - hisy vokany eo:
Ny fisondrotan'ny Zanaka dia nandaitra tokoa ny famporisihana ny fiakaran'ny talenta baolina any Korea Atsimo hifaninana amina matihanina amin'ny Football Football. Ny tena mampiavaka azy ireo dia Lee Kang-in iza no mametraka ny varotra ho toy ny afovoan-tany ho an'i Valencia.
Ny anarana lehibe fantatsika amin'ny lalao baolina kitra dia manana salanisa tsara izay manamarina ny antony maha-lehibe azy ireo. Ny Zanaka dia tsy zavatra hafa miaraka amin'ny isa 87 an'ny FIFA tamin'ny ankapobeny. Na izany aza, mino ny mpankafy fa mendrika teboka fanampiny izy Raheem Sterling izay mirehareha amin'ny isa 88.
Miakatra sy miakatra ny tarehimarika ankapobeny ataon'ilay mpamosavy. 📷: SoFIFA.
Son Heung-min tantaram-piainana - Wiki Data
Anarana feno Son Heung-min
Daty nahaterahana Faha-8 ny Jolay 1992
Toerana nahaterahana Chuncheon ao Gangwon, Korea Atsimo.
Age 28 taona (tamin'ny 15 May 2020)
Milalao toerana Winger
Ray Aman-dreny Eun Ja Kil (reny), Son Woong-Jung (rain)
mpiray tam-po Heung-Yun Zanaka (zokilahy).
sipany Bang Min-ah, Yoo So-young.
fialamboly Nandeha dia niasa, niasa, nilalao lalao video & nijerena sarimihetsika.
Misaotra betsaka tamin'ny famakiana ity fanoratana mampivoatra ity momba ny Biography Son Heung-min. Ao amin'ny Lifebogger, maniry ny hiantoka ny fahitsiana sy ny tsy miangatra isika amin'ny fanaonay andavanandro hanaterana ny zava-misy sy ny tantaran'ny fahazazana. Nahita izay toa hafahafa ato amin'ity lahatsoratra ity ve ianao? Azafady mba mifandraisa aminay Raha tsy izany, manokana fotoana kely mba hanehoanao hevitra ny hevitrao momba ny fanoratantsika sy ilay mpilalao baolina kitra Koreana Tatsimo.
Tantaran'i Pierre-Emile Hojbjerg Childhood momba ny zava-misy momba ny fitantarana ny Biography
Ryan Sessegnon Childhood Story Plus tsy azo tononina
Davinson Sanchez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra